Ny Delta Air Lines dia nanampy fiaramanidina Airbus sy Boeing efa niasa 36 ho an'ny andian-tafika tao anatin'ny fiakaran'ny vidin'ny fitetezana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Delta Air Lines dia nanampy fiaramanidina Airbus sy Boeing efa niasa 36 ho an'ny andian-tafika tao anatin'ny fiakaran'ny vidin'ny fitetezana
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny areti-mifindra COVID-19 dia nanome fotoana iray hanamorana ny fiaramanidin'i Delta sy hanafainganana ny fisotroan-dronono 18 widebody 777, ary ny MD-88 sy ny MD-90 fiaramanidina teratany, izy rehetra dia antitra sy tsy dia mahomby.
Ny areti-mandringana dia nanome ny Delta hanana tombontsoa ara-barotra tsy manam-paharoa hanampiana fiaramanidina taranaka vaovao amin'ny vidiny manintona.
Delta hanampiana add 29 Boeing 737-900ER efa niasa ary 7 ny Airbus A350-900s nampiasana fiaramanidina.
Ny fanavaozana ny sambo Widebody dia fitaovana lehibe amin'ny fanarenana an'i Delta, ary hanampy amin'ny fametrahana ny Delta hahazoana tombony maharitra sy fitomboana amin'ny ho avy.
Ny Delta Air Lines dia nanao fifanarahana hanampiana olona 29 efa niasa Boeing 737-900ER ary fampanofana fito nampiasaina Airbus A350-900 rehefa manohy mandrindra sy manavao ny andian-tsambony izy ireo. Ny fiaramanidina fanampiny 36 dia hanatsara ny fahombiazan'ny solika ary hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa, sady manohana ny paikadin'ny fanavaozana ny fiaramanidina Delta mifantoka amin'ny fanatsorana, refy, habe ary faharetana.
"Ireo fiaramanidina ireo dia fampiasam-bola amin'ny ho avin'ny Delta," hoy izy Delta Air-dalana, Tale jeneraly Ed Bastian. "Rehefa mijery ny areti-mandringana isika, ny fomban'ny Delta mifehy sy manavao ny fanavaozana ny sambo dia mampiorina antsika amin'ny fitomboana rehefa miverina ny fangatahan'ny dia, sady manatsara ny traikefan'ny mpanjifa ary manohana ny fahavononantsika maharitra
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nanome fotoana iray hanamorana ny andian-tsambon'i Delta ary hanafainganana ny fisotroan-dronono 18 widebody 777, ary ny MD-88 sy MD-90 fiaramanidina teratany, izy rehetra dia antitra sy tsy dia mahomby. Ny areti-mandringana dia nanome tombontsoa ara-barotra tsy manam-paharoa hanampiana fiaramanidina taranaka vaovao amin'ny vidiny manintona.
Ny fanavaozana ny sambo Widebody dia fitaovana lehibe amin'ny fanarenana an'i Delta, ary hanampy amin'ny fametrahana ny Delta hahazoana tombony maharitra sy fitomboana amin'ny ho avy. Amin'ny maha fiaramanidina an'ny Delta, ny A350 dia manome traikefa ho an'ny mpanjifa manerantany, manatsara ny fahaizan'ny entana, mampihena ny vidin'ny singa ary mandray anjara amin'ny ho avy maharitra kokoa.
Ny A350 manaraka dia mandoro solika 21 isan-jato ambany noho ny 777s soloin'izy ireo. Ny fahombiazan'ny solika nohatsaraina dia laharam-pahamehana amin'ny ezaka ataon'ny Delta hampihenana ny fandefasana gazy karbonika sy ny sidina mankany Net Zero. Ny fahazoana olona tery 29-737ER 900 dia mameno ireo andian-tafika misy an'i Delta ihany koa.
Delta dia hampanofa ireo A350 amin'ny alàlan'ny AerCap ary hividy 27 amin'ireo 737-900ER amin'ny vola tantanan'ny Castlelake, LP, raha 737-900ER roa ambiny kosa dia hamatsy vola avy amin'ny vola tantanan'i Castlelake, LP Ireo fifampiraharahana roa ireo dia iharan'ny fepetra famaranana. Ny fandefasana ny fiaramanidina dia ho vita amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2022, ary hiditra amin'ny serivisy izy ireo aorian'ny fahavitan'ny fanovana.
Ho fanampin'ny A350 fito izay ao anatin'ity fanambarana ity, ny Delta amin'izao fotoana izao dia manana 15 A359 miasa ary 20 am-pilaminana. Ny fanampiana ireo 29 ​​737-900ER dia hitondra ny totaliny ho 159 amin'ny andian-tsambony.
Ity fifanarahana ity dia taorian'ny fanapahan-kevitry ny Delta tamin'ny volana aprily mba hampiasa safidy amin'ny fiaramanidina A25neo miisa 321, izay hanomboka amin'ny taona ho avy. Ireo fiaramanidina ireo dia manome ny vidin'ny seza ambany indrindra amin'ny fiaramanidina Delta.